Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Tale Jeneralin'ny Sleepout London: Manova ny fiainana ao anatin'ny hatsiaka mangidy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
by Elisabeth Lang - manokana ho an'ny eTN
Henrik Muehle, Tale Jeneralin'ny Flemings Hotel any London Mayfair, ao amin'ny CEO Sleepout
Mpanoratra Elisabeth Lang - manokana ho an'ny eTN
Nandao ny fandriany nandritra ny alina iray ny 22 Novambra ireo lehiben'ny fandraharahana be fangorahana indrindra ao Londres mba hatory ao amin'ny Lord's Cricket Ground, mba hanangonam-bola ho an'ny olona tsy manan-kialofana amin'ity ririnina ity.
"Ny alina izao no alina," hoy i Henrik Muehle, tale jeneralin'ny Flemings Hotel any London Mayfair. “Nanangona ny kitapo fatoriako aho ary hanao akanjo mafana be dia be hatoriana ao anatin’ny alina mangatsiaka be ao amin’ny Lapan’ny Cricket an’ny Tompo eo amin’ny lalana St. Johns Wood, any Londres, mba hanehoana firaisankina amin’ny olona sahirana.”
Bianca Robinson avy ao amin'ny Lords Cricket Ground dia nilaza hoe: “Sarotra ho antsika rehetra ny fanakatonana. Alao sary an-tsaina anefa raha tsy manana trano ianao, na fandriana, na sakafo, ary tsy misy toerana ho azo antoka.
“Ity krizy ity dia nitarika olona maro hidina an-dalambe satria very asa, tsy afaka nandoa hofan-trano, ary sahirana tamin'ny famelomana ny fianakaviany. Ny sasany dia afaka nampiasa efitrano fandraisam-bahiny tsy misy na inona na inona, saingy tsy misy fanohanana mitohy dia hiverina an-dalambe izy ireo. Mila ny fanampianareo izy ireo. Handry am-pandriana miaraka amin'ireo tompona orinasa, mpiasam-panjakana ary manam-pahaizana ambony, ary mpitarika isan-karazany ianao, izay rehetra mahasahy ireo singa matory eny an-kalamanjana mba hanairana ny saina sy ny famatsiam-bola, ny olona tsirairay dia miantoka ny hanangona na hanome vola farafahakeliny £ 2,000 hiadiana amin'ny tsy fananana trano sy ny fahantrana. any Londres. Mety hanova fiainana ny alina matory miaraka amin’ireo namanao ao amin’ny Tompo.”
Ny CEO Sleep Out Nisy mpandray anjara 100 teo ho eo no natao taorian'ny nahemotra tamin'ny taona 2020. Tamin'ny taona 2019, niaritra ny hatsiaka ireo natory ary nanangona £85,000 tsy mampino ho an'ny asa soa eo an-toerana.
tonHenrik Muehle sy Hillary Clinton
Henrik Muehle dia iray amin'ireo mpanangom-bola lehibe indrindra ho an'ny CEO Sleep fanangonam-bola. Nandritra ny herinandro maizina tamin'ny taon-dasa rehefa namely an'i Londres ny valan'aretina, ary ny hotely sy trano fisakafoanana, trano fisotroana kafe ary trano fisotroana dia tsy maintsy nikatona nandritra ny fanakatonana lava, dia nahandro kari (sakafo 300) tao amin'ny lakoziany trano fandraisam-bahiny kamboty ho an'ny tsy manan-kialofana izy. Raha ny mahazatra dia manana chef Michelin Star ao amin'ny trano fisakafoany ORMER Mayfair izy, saingy nandritra ny fanakatonana dia tsy nisy mpiasa, tsy nisy chef ary tsy nisy vahiny tao amin'ilay hotely. Tsy maintsy nifindra tao amin'ny hotely niaraka tamin'ny olona vitsivitsy izy mba hitazomana ny zava-drehetra ho azo antoka.
Fotoana nahatsiravina izay namela mpiasan'ny hotely sy trano fisakafoanana maro manerana an'i Londres tsy manana asa sy fidiram-bola. Tsy vitan’ny hoe very asa ny maro tamin’izy ireo fa ny tranony ihany koa satria tsy afaka nandoa hofan-trano intsony ka voatery natory. Tsy afaka niverina tany amin'ny tanindrazany ny olom-pirenena EU satria zara raha nisy sidina na fiarandalamby niverina tany amin'ny kaontinanta.
Rehefa nanao dia lavitra namakivaky ny araben'i Londres i Henrik Muehle dia nahita ny toeram-pisakafoanana tamin'ny alina ary nanapa-kevitra avy hatrany ny hanampy. Maro tamin’ireo mpiasany taloha no faly nanohana azy. Ny firaisankina lehibe tamin'ny fanomezana sakafo sy zava-pisotro mafana tao amin'ny banky sakafo eo amin'ny kianjan'i Trafalgar teo akaiky dia nahavariana. Nikarakara kitapo sakafo avy amin'ny M&S ho an'ireo sahirana ihany koa i Henrik.
Mendrika medaly izy, hoy i Frances Smith, Londres. Manaiky tanteraka aho ary manantena fa tsy hisy olona sery rehefa avy natory tamin'ny rivotra mangatsiaka tao amin'ny Lord's Cricket Grounds.
The nofy ratsy ny tsy manan-kialofana dia atrehin'ny olona 250,000 izay isan'andro any UK. Ny fandinihana vao haingana dia mampiseho ny fahamarinana manafintohina momba ny tsy fananana trano any Angletera.
Natsangan'ny filoha Andy Preston tamin'ny taona 2015, ny hetsika CEO Sleepout dia natao nanerana an'i UK, anisan'izany ny hetsika Sleepout 8 ho avy amin'ity taona ity. Ny Sleepout dia natao tao amin'ny Lord's Cricket Ground any avaratrandrefan'i London, ary natory tamin'ny alina mangatsiaka indrindra tamin'ity taona ity ny mpitarika orinasa mba hanangonam-bola sy hampahafantarana ny fitomboan'ny krizy any Angletera.
"Nahafinaritra ny rivo-piainana tamin'ny alina, ary na dia teo aza ny hatsiaka, ny fahafantarana fa nanampy ny olona manerana ny faritra izahay dia niteraka fihetseham-po tena mafana," hoy ny mpandray anjara iray.
Inona no fantatsika momba ny torimaso mafy any Londres?
Olona 11,018 no voarakitra ho natory mafy teto an-drenivohitra tamin'ny taona 2020/21. Ity angon-drakitra ity, avy amin'ny Greater London Authority's, dia manara-maso ireo olona matory be any Londres hitan'ny mpiasan'ny serivisy. Nitombo 3% izany raha oharina amin’ny fitambaran’ny olona 10,726 hita tamin’ny taon-dasa ary efa ho avo roa heny noho ny tamin’ny 10 taona lasa. Tao anatin'ny totalin'ny 11,018, 7,531 no matory masiaka vaovao izay tsy mbola hita natory tany Londres talohan'ity taona ity.
Ny isan'ny matory manjavozavo dia maneho ny tendron'ny iceberg. Tsy tafiditra ao ireo mijanona ao amin'ny trano fialofana sy trano fandraisam-bahiny. Tsy ny olona matory amin'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny alina, na tsy tazana, na mandehandeha eny amin'ny farafara iray mankany amin'ny iray hafa, hoy ny Glassdoor.
Elisabeth Lang - manokana ho an'ny eTN
Elisabeth dia niasa tao amin'ny orinasa fitsangatsanganana iraisam-pirenena sy indostrian'ny fandraisana vahiny nandritra ny am-polony taona maro ary nandray anjara tamin'ny eTN efa ho 20 taona. Manana tambajotra manerantany izy ary mpanao gazety fitsangatsanganana iraisam-pirenena.